Sajhasabal.com | HomeEDV चिट्ठा भर्ने वेवसाइटको अकस्मात सर्भर डाउन
विप्लवका प्रवक्ता प्रकाण्ड थुनामुक्त
प्रदेश ७ को नाम ‘सुदूरपश्चिम’ राख्न सिफारिस
विपद्पछि हुने आर्थिक नोक्सानीलाई कम गर्दै जानुपर्छ: अर्थमन्त्री
नेपाली कांग्रेस परित्याग गरि दाहाल नेकपा प्रवेश
अब हिंसाका कुरा जनता र देशको विरुद्धमा: रक्षामन्त्री पोखरेल
तीन किलो सुनसहित दुईजना पक्राउ
सर्लाही नापी कार्यालयका अमिन घुस रकमसहित पक्राउ
राष्ट्रसङ्घमा पुनः निर्माणसम्बन्धी छलफल हुने
नुवाकोटमा टिपरले किचेर एकजनाको मृत्यु
कालीगण्डकीको मर्मत शीघ्र सम्पन्न गर्न प्राधिकरणको पहल
देशकै तेस्रो केबुलकारको परीक्षण सफल
सर्वसाधारणले २१ गतेदेखि नयाँ नोट पाउने, कुन कुन बैंकमार्फत साट्न सकिन्छ ? हेर्नुहोस्
कतार, साउदी, मलेसिया र दुबई लगाएत देशहरुको पैसाको मूल्य बढ्यो (सुचिसहित)
असारे विकास: बाइस दिनमै भत्कियो सडकको ढलान
नुवाकोट दरबारको पुनःनिर्माण अनिश्चित
गायक पुस्कल शर्माले आफ्नो जन्मदिनमा सबै परदेशीलाई रुवाउने यस्तो मार्मिक गीत ल्याए (भिडियो)
'ठग्स अफ हिन्दुस्तान' मा यस्तो देखियो आमिरको लुक्स
पूनम पाण्डेको अर्को हर्कत, भन्छिन् - 'अब आउँछ बास्तविक मज्जा ।’
मेलिनाको गीतमा रोहित र एल्जिनाको ठुम्का (भिडियो)
अब हाँस्य टेलिसिरियल 'मेरिबास्सै'मा अशोक दर्जी पनि देखिदै
काठमाण्डौं हेटौंडा सुरुङ्गमार्गका ठगहरुलाई कारवाही गर्न राज्य उदासीन किन ?
'पूर्व र अन्तिम स्वीकृति बन्द गरेर रारा घुम्न जाऔं, प्रधानमन्त्री हामीलाई लिन रारामै आईपुग्छन्'
विदेश जानेसँग ४ लाखसम्म उठाइएको छ, भित्र-भित्रै मिलेमतो पो छकी ?
म्यानपावरको धरौटी बढाएर वैदेशिक रोजगारको बेथिति सुध्रदैन, अझै बिग्रन्छ !
अब हामी बिदेश नजाउन्जेल हाम्रो दैनिकी सरकारले टारीदिनु पर्यो...
EDV चिट्ठा भर्ने वेवसाइटको अकस्मात सर्भर डाउन
Posted on: 10 Oct, 2017
। जमिन राइ । अन्तिम पटक भनि हल्ला चलिरहेको EDV २०१९ को सर्भर असोज २४ गते मंगलबार बिहान ७ः१५ देखि डाउन भएको छ । dvlottery.state.gov रहेकाे उक्त अाधिकारिक वेवसाइट २०७४ असोज १७ गते रातको ९:४५ देखि खुलेको एक हप्ता पछि नै सर्भर डाउन भएकोले प्रयोग कर्ता निराश भएका छन् । कुनै पनि वेवसाइटको क्षमता हुन्छ, क्षमता भन्दा माथि प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्न खोजेमा कुनै पनि वेवसाइटको सर्भर डाउन हुन्छ ।
सन् २०१९ डाइभर्सिटी अप्रवासी भिसा कार्यक्रम वार्षिक रुपमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले संचालन गर्ने एक चिट्ठा हो । यस अन्तर्गत विगत पाँच वर्षमा ५०,००० भन्दा बढी नागरिकहरु संयुक्त राज्य अमेरिका मा EDV अन्तर्गत नगएका देशहरुको नागरिकलाई छनोट गरी अमेरिकाको आप्रवासी भिसा प्रदान गरिन्छ ।
सर्भर के हो ?
सर्भर भनेको जानकारी वा प्रोगाम भण्डार गर्न सकिने ठाँउ हो । हामीले इन्टरनेटमा देखिने जानकारी सर्भरमा बसेको हुन्छ । सामान्य भाषामा यो सूचना भण्डार गर्ने ठाँउ हो । सर्भर चौबिस घण्टा खुला हुनुपर्छ । तब मात्र हामीले चाहेको सूचना कुनै पनि समयमा हेर्न सक्छौँ ।
किन वा कसरी हुन्छ सर्भर डाउन
वेवसाइट प्रयोगकर्ता र सर्भरको बीचमा सर्भरको काम जहिल्यै प्रयोगकर्तालाई सेवा दिने हो । जब सर्भर सेवा दिन असक्षम हुन्छ तब हामी यसलाई सर्भर क्र्यास (Server Crash) वा सर्भर डाउन (Server Down) भन्छौँ ।
कुनै पनि वेवसाइटको आफ्नै सर्भर हुन्छ । र त्यसको ब्यान्डवीथ हुन्छ । ब्यान्डवीथ भनेको कति सेवा प्रयोग गर्न दिने भन्ने क्षमता हो । क्षमता भन्दा धेरै प्रयोगकर्ता ले सेवा लिन खोजेमा सर्भर डाउन हुन्छ ।
पहिले पनिभ EDV चिट्ठा भर्ने वेवसाइटको सर्भर डाउन भइसकेको र यसको व्यवस्थापन हुने भएकोले यसपालीको सर्भर डाउनको मर्मत पनि हुन्छ भन्नेमा प्रयोगकर्ता ढुक्क हुनुपर्छ ।
जेलरको हत्या गरी कैदी फरार
स्वीस जहाज अपहरण
सन् २०३० सम्म दिर्घरोगबाट हुने मृत्युलाई एक तिहाइमा झार्ने लक्ष्य पूरा नहुने सम्भावना